नेपाली कांग्रेसमा गणेशमानको खोजी | Hulaki Online
2021 Mar 07, Sunday 11:59
नेपाली कांग्रेसमा गणेशमानको खोजी
संप्रेषण September 18, 2016
शिव लम्साल –
नेपाली राजनीति किन यति साह्रो बिग्रिएको ? देशमा किन यति धेरै भाँडभैलो ? किन देश विकास भएन ? यसको मुख्य कारण सिंहदरबारभित्रको एउटा कोठाको अनौठो भित्ता हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको यो भित्तालाई नेपालको सबैभन्दा मूल्यवान र अदभूत भित्ता भने हुन्छ । शायद सबैभन्दा आकर्षक भित्ता पनि यही हो ।
यो भित्ता हो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको फोटो टाग्ने थलो । भित्तामा लहरै लस्करै नेपालका भूपू प्रधानमन्त्रीको फोटो टागिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेर सपथ लिएपछि भन्छन्– म भित्तामा फोटो टाग्न मात्र प्रधानमन्त्री बनेको होइन । तर, अधिकांश प्रधानमन्त्रीको इतिहास भित्तामा फोटो टाग्नेमा सीमित भएको तीतो तथ्य पनि विचारणीय छ ।
यो भित्तामा फोटो टाग्नमा केन्द्रीत छ नेपाली राजनीति । ठूला नेताहरुको प्रधानमन्त्री बन्ने रहर, एकपटक प्रधानमन्त्री बनेकाहरुको अर्काे पटक प्रधानमन्त्री बन्ने रहर हुन्छ । उनीहरुको यही रहरले राष्ट्रिय राजनीतिलाई यति विकृत बनाइरहेको छ । सिंहदरबारको भित्तामा एकथान फोटो झुण्डाएर मात्र मर्ने नेताहरुको रहरले मुलुकमा द्धन्द्ध बढाएको छ । कुर्सी सर्वोपरी हो र कुर्सीमा पनि सिंहदरबारको त्यो भित्तामा फोटो झुण्डाउन पाइने कुर्सी नै अन्तिम सत्य हो भन्ने विकृत मान्यता स्थापित गरिएको छ । यही कारण राजनीति विकृत हँुदै गयो, विकृत राजनीतिले मुलुकको विकासदेखि यावत क्षेत्र दुष्प्रभावित गरेको छ ।
सिंहदरबारको कुर्सी र त्यो भित्तामा फोटो टाग्न राजनीतिकर्मीहरु जे पनि गर्न तयार देखिन्छन्, जति गिर्न पनि तयार बन्छन् । यस्तो किन भइरहेछ ? के राजनीति भनेको कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने कर्म हो ? प्रश्न उठ्छ र यस्तो प्रश्नको जवाफमा उदाहरण दिन सकिने थोरै नाम छन् ।
नामै काफी छ
कुर्सीका लागि अपहत्ते मरिहत्ते गर्ने नेताहरुको भीडमा कहिले नदेखिएको पात्र हुन् गणेशमान सिंह । यो नाम नै काफी छ श्रद्धाले शिर निहुराउनका लागि । सिंहदरबारको भित्तामा फोटो झुण्डाउने मौकालाई लात हानेर पद र शक्तिभन्दा माथि उठेर देशका लागि योगदान गर्ने पात्रको नाम हो गणेशमान सिंह । विगतमा प्रधानमन्त्री हुन लायक र त्यस्तो उचाई बनाएका धेरै नेताले प्रधामन्त्री बन्ने मौका पाएनन् । गणेशमानले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका बारम्बार पाए, मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पद लिन्न भने ।
गणेशमान प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने राष्ट्रिय राजनीति आजको अवस्थामा पक्कै हुने थिएन । प्रधानमन्त्री बनेर भन्दा नबनेर उनले देश र लोकतन्त्रको सेवा धेरै गरे । २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि राजसंस्था असाध्यै बलियो थियो । राजाबाट सधै प्रजातन्त्रलाई खतरा थियो । गणेशमान पद बाहिर बसेर खबरदारीमा लागे । कांग्रेस र प्रजातन्त्रलाई पर्याय बनाउनमा गणेशमानले भूमिका निर्वाह गरे । गणेशमानको उचाई प्रधानमन्त्री पदभन्दा माथि थियो । त्यो उचाईलाई उनले प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न उपयोग गरे ।
गणेशमान सिंह भित्तामा फोटो टास्ने लोभमा कहिले लागेनन्, त्यसैले जनताको मनमा फोटो टासिने नेता बने ।
गणेशमान र संघर्ष
गणेशमान सिंहको जीवन अविश्रान्त संघर्षमा बित्यो । नेपालमा आजसम्म कुनै पनि नेताले गणेशमान सिंहले जति गाली खाएका छैनन् होला । वीपीको अवसानपछि पञ्चायतकालभरी गणेशमानको तेजोवध गर्ने अभियान चल्यो । गणेशमानलाई खुईल्याएपछि कांग्रेसलाई सिध्याउन सकिन्छ भन्ने पञ्चायतले बुझेको थियो । गणेशमानलाई किन्न पञ्चायतले प्रयास गर्यो । गणेशमान लिलामीमा चढ्ने नेता होइनन् र यिनलाई लोभमा फसाउन सकिन्न भन्ने बुझेपछि उनलाई दमन गरियो । उनको पूरै परिवार दमनमा पर्यो । त्यो दमनबाट नेता बने प्रकाशमान सिंह ।
आजको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रकाशमान सिंह पञ्चायती दमनबाट नेता बनेका हुन् । पञ्चायतकालमा गणेशमानको घर आन्दोलनको केन्द्र थियो । गणेशमानकी धर्मपत्नी मंगलादेवी सिंह र छोरा प्रकाशमान सिंह पञ्चायत विरोधी अभियानका सारथीमध्ये थिए । बहुदल आएपछि मंगला र प्रकाशमानलाई गर्नसम्म प्रहार गरियो, गणेशमानले परिवारवाद लादे भनेर । पञ्चायतकालभरी दुख पाउने र संघर्ष गर्ने मंगला र प्रकाशमानलाई यसकारण तेजोवध गरियो कि गणेशमानलाई बदनाम बनाउन सकियोस् ।
जबकि गणेशमान परिवार र पदभन्दा माथि उठेका नेता थिए । प्रधानमन्त्री पदलाई लात हान्ने नेताले परिवार च्याप्ने कुरै आउँदैनथ्यो । तर, उनलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट सुनियोजित रुपमा प्रहार गरियो । पञ्चायतकालीन संघर्षमा खारिएका प्रकाशमानले गणेशमानको अनुपस्थितिमा पनि आफ्नो नेतृत्व क्षमताको परिचय दिइसकेका छन् । गणेशमानको संघर्षलाई अब प्रकाशमानले होइन नेपाली कांग्रेसले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने चेत कांग्रेसजनमा त्यति धेरै नरहेको देखिन्छ । रक्तवंशलाई सन्तानले निरन्तरता दिन्छन् तर राजनीतिक विचारलाई कार्यकर्ताजन र पार्टीले निरन्तरता दिनुपर्छ ।
खोई गणेशमान ?
गणेशमान भौतिक रुपमा उपस्थित छैनन् तर कांग्रेसजनले आफ्ना नेताहरुभित्र गणेशमानको अवशेष खोज्छन्, गणेशमानको अवतार खोज्छन् । गणेशमानको जस्तो त्याग, गणेशमानको जस्तो संघर्षशीलता, गणेशमानको जस्तो प्रष्ट बोलीव्यवहार खोई कुन नेतामा छ ? गणेशमानले राजनीति गरे, त्यसैले जे कुरा पनि प्रष्ट बोल्थे । आजकालका नेता राजनीतिभन्दा कूटनीति धेरै गर्छन्, त्यसैले घुमाउरो कुरा गर्छन्, प्रष्ट बोल्दैनन् । गणेशमानमा निजी स्वार्थ थिएन, देश र प्रजातन्त्र नै उनको स्वार्थ थियो । त्यसैले जे पनि प्रष्ट बोल्थे । आजका अधिकांश नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्लिप्त छन्, त्यसैले प्रष्ट बोल्न सक्दैनन् ।
कांग्रेसलाई अहिले यस्तो नेता चाहिएको छ जसले प्रष्ट बोल्न सकोस्, देखेको कुरा धक नमानी ठाडै भन्न सकोस् । दूधको दूध, पानीको पानी भन्न सकोस् । गुटको लुगा लगाएपछि सुन्दर देखिएँ भनेर फुर्ति लगाउने नेताहरुलाई तिमी सुन्दर होइन निर्वस्त्र भयौ भनिदिने नेता चाहिएको छ । पदमा नबसेर पनि देश र जनताका लागि पार्टीमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणीय काम गरेर देखाउने नेता चाहिएको छ । अर्थात्, कांग्रेसलाई फेरि एउटा गणेशमान चाहिएको छ । कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले गणेशमान खोजिरहेका छन् ।
अहिलेका नेताहरु गणेशमान बन्न तयार छन् ?